Taliyaha booliiska magaalada Garoowe oo ku dhaawacmay is-rasaasayn - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyaha booliiska magaalada Garoowe oo ku dhaawacmay is-rasaasayn
August 22, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha booliiska magaalada Garoowe Maxamuud Muuse Bile oo si guud loogu yaqaan Fardafuul ayaa ku dhaawacmay is-rasaasayn ka dhacday Garoowe Arbacadii, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka.
Is-rasaasaynta ayaa ka dhacday guri xaafadeed kuyaala Garoowe iyada oo booliisku isku dayayeen in ay xiraan nin lagu eedeeyay in uu kufsaday gabar, sida ilo-wareedku sheegeen.
“Ninka ayaa rasaas ku furay ciidanka booliiska, mid kamid ah xabadaha ayaa ku dhacday gacanta midig ee taliyaha,” ilo-wareedka ayaa sidaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Ninka ayaa waxaa toogtay oo dhaawacay ciidamada booliiska kadib markii uu dhaawacay taliyahooda.
Mr Fardafuul ayaa loo qaaday isbitaal kuyaala magaalada Carmo waxaana uu ku suganyahay xaalad caafimaad oo wanaagsan.